राहुल पछिको भारतीय कंग्रेस | Kendrabindu Nepal Online News
राहुल पछिको भारतीय कंग्रेस
१९ असार २०७६, बिहीबार १८:४४
राहुल गान्धिले भारतीय कंग्रेसको अध्यक्ष पदबाट बुधबार राजीनामा दिएपछि अब कसको नेतृत्वमा पार्टी अगाडि बढ्छ भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । सन् १९४७ पछि भारतमा ऐतिहासिक पार्टीको रुपमा अगाडि आएको कंग्रेस यतिबेला संकटमा परेको छ । सन् १८८५ मा स्थापित पार्टीमा कुनैबेला शुवासचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरु, लालबहादूर शास्त्रि, इन्दिरा गान्धि, राजिव गान्धिजस्ता दिग्गज नेताको नेतृत्व थियो । तर, त्यही कंग्रेस अहिले नेतृत्वविहिन बनेको छ ।
सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टीसँग पराजित भएपछि कंग्रेसलाई अब नयाँ अनुहार चाहिएको विश्लेषण गर्दै पार्टीले तत्कालिन उपाध्यक्ष राहुल गान्धिलाई भावि नेताका रुपमा स्थापित गर्न शुरु गरेको थियो । त्यसयता राहुलले पार्टीका लागि दिनरात योगदान गरेका थिए ।
उनको योगदानको कदर गर्दै गत वर्षको मे महिनामा पार्टीले राहुललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्यो र आउँदै गरेको २०१९ को लोकसभा निर्वाचनका लागि पार्टीको कमाण्डर तोक्यो । राहुलको कमाण्डमा चुनावमा होमिएको कंग्रेस नराम्रोसँग पछारियो । यतिसम्म कि कंग्रेसको पुस्तौनी गढ मानिने उत्तर प्रदेशको अमेठीबाट राहुल आफू समेत पराजित भए । अमेठीबाट यसअघि इन्दिरा गान्धि, राजिव गान्धि, सोनिया गान्धिले चुनाव जित्ने गरेका थिए ।
आम निर्वाचनको परिणामबाट विक्षिप्त बनेका राहुलले नतिजा लगत्तै पार्टीको कार्यसमिति बैठकमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिन खाजेका थिए । तर पार्टीका बरिष्ठ नेताहरुले तत्काल राजीनामा गर्नबाट उनलाई रोकेका थिए । निर्वाचनको परिणाम लगत्तै पद त्याग्दा पार्टीलाई राजनीतिक मात्र नभई मनोबैज्ञानिक क्षति समेत पुग्ने तर्क गर्दै पार्टीका वरिष्ठ नेता मोतीलाल बोहरालगायतले राहुललाई रोकेका थिए ।
तत्कालका लागि रोकिएका राहुलले अन्ततः पद त्याग गरेरै छाडे । चार पृष्ठ लामो निकै भावुक राजीनामा पत्रमा उनले अरुलाई जवाफदेही बनाउनुभन्दा पहिला आफु जवाफदेही हुनु जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । राहुलले राजीनामा पत्रमा जनता र पार्टीप्रति जवाफदेही बन्न जरुरी रहेको र आफुले अध्यक्षका रुपमा त्यसको उपेक्षा गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
कंग्रेसमा अबको बाटो
राहुलको राजीनामापछि अब भारतीय कंग्रेस पार्टीलाई नयाँ र ताजा नेतृत्वको खाँचो रहेको छ । कंग्रेसले कसरी आफ्नो नेतृत्वको चयन गर्छ, त्यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । यस्तो परिस्थितिमा भने कंगे्रसको विधानमा सबैभन्दा बरिष्ठ महासचिवलाई अस्थाई रुपमा अध्यक्षको काम सम्हाल्ने जिम्मा दिइने उल्लेख छ ।
कंग्रेसमा मोतीलाल बोहरा सबैभन्दा वरिष्ठ महासचिव हुन् । अब वोहराले पार्टीको कार्यसमितिको बैठक बोलाउदै पार्टीको भावी कदमबारे छलफल चलाउनु पर्नेछ । राजीनामा दिंदैै गर्दा राहुलले आफ्नो चार पृष्ठको पत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कुरा उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, भारतीय राजनीतिमा कंग्रेसले आफ्नो प्रतिद्वन्द्विलाई तबसम्म हराउन सक्दैन जबसम्म पार्टीभित्रका नेताहरु सत्ताको चाहानालाई छोड्दैनन् र एउटा विशाल विचारधारको लडाई लड्दैनन् ।
राहुलको यो भनाइको इशारा पार्टीका नेताहरुका लागि मात्र नभइ स्वयं आफैंलाई पनि थियो । सत्तामा आसिन भाजपाले सन् २०१४ मा एउटा विशाल विचारधाराको लडाई लडेको थियो, जसले उसलाई दोस्रो कार्यकालका लागि पनि सहजै सत्ताको बाटोमा डोर्याइदियो । राहुलको यस्तो भनाईबाट उनले भारतीय राजनीतिको धेरै शिक्षा पाएको र अन्ततः आफुलाई परिपक्व देखाएको विश्लेषण भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले गरिरहेका छन् ।
पार्टीमा राहुलको अन्त्यपछि अब नेहरु–गान्धि परिवारका कोही सदस्य नयाँ नेतृत्व छान्न सक्रिय भुमिका निभाउलान की ननिभाउलान् ? यो अहिले भारतीय राजनीतिमा पेचिलो प्रश्न बनेको छ । सर्बसम्मतबाट चुनिएको नयाँ नेताले पार्टीलाई एकजूट राख्न सक्लान् ? यो पनि भविष्यमा नै थाहा हुनेछ ।
तर, राहुलले कंग्रेस पार्टीलाई दोबाटोमा ल्याएर छाडेका छन् । अध्यक्षका रुपमा आफु सफल नभएको ग्लानी गर्दै पार्टी त्याग्नु अघि उनले कंग्रेसलाई यस्तो स्थानमा स्थापित गर्नसक्नु पथ्र्यो जहाँ पार्र्टीलाई अघि बढाउने एउटा सबल नेतृत्व होस् । तर भावी नेतृत्वको प्रक्रिया शुरु हुन पूर्व नै उनले पार्टीलाई बिचमै छाडेर गएका छन् ।
पार्टीबाट राजीनामा गर्दै राहुलले दक्षिण एशियाली राजनीतिमा एउटा कुरा दह्रोसँग स्थापित गरिदिएका छन् । त्यो हो, नैतिक जिम्मेवारी । उनी नैतिक जिम्मेवारी लिनबाट चुकेनन् र राजीनामा गरि छाडे । उनको राजीनामासँगै दक्षिणी छिमेकी भारतमा अब विरासत र परिवारवादको राजनीति सधैंका लागि सकिएको विश्लेषण गरिएको छ ।
rahul gandhi, भारतीय कंग्रेस, राहुल गान्धि
Prevपूर्व प्रहरी प्रमुख चन्दद्वारा सर्वोच्चमा आत्मसमर्पण
के तपाईको उचाई कम छ ? अग्लो देखिन यसो गर्नुहोस्Next
राहुल गान्धीको राजीनामा स्वीकृत, अन्तरिम अध्यक्षमा सोनिया गान्धी
राहुल गान्धीले त्यागे अध्यक्ष पद
मोदीले दिए राजीनामा, गान्धी पनि राजीनामा दिने तयारीमा
राहुल गान्धीले दुई ठाउँबाट चुनाव लड्ने
भारतमा राहुल गान्धीले आफ्नी बहिनीलाई बनाए पार्टी महासचिव